“အတွေးစလေးတွေ”: ချီလေတဲ့ချီလေ ( ၂ ) . . .
Posted by Han Kyi at 3:10:00 am
ရေးချင်တာသာ... ဆိုတော့ ...
အင်း အားလုံးကြည့် ဖတ်ခဲ့ ပြီးမှ
ဘာ......... သွားတွေ့ တယ်မှတ်လဲ ..၊
“အသားစင်းကော” တဲ့ ဗျာ။
ကျန်တဲ့ အနုအရွ အလှအပတွေ
မခံစားနိုင်တော့ ဘူးဆရာရေ့ ၊
စကားများရဲ့  ကောင်းကင် အဲ..
တလူလူလွင့် နေတဲ့“ခွပ်ဒေါင်း” အလံ
နောက်လိုက်နေမိခဲ့ တာ ၃လကျော်
၄လထဲ ဝင်နေမိလို့ရွာလည်းမရောက်
ကိုယ့် အိမ်လည်း မဝင်မိဖြစ်ခဲ့ ရလို့ 
အော်.. ဒါနဲ့ဆရာရေ့ ..
ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ဂိုးသွင်းရမလဲ
မှောင်မှောင်မည်းမည်း ထဲက မဏ္ဍပ်တွေကို လာကြည့်သွားပါတယ်.. :D
23 April 2012 at 05:40
လက်ဝှေ့ပွဲ တစ်ချီ တစ်မောင်း မကြည့်ခဲ့ဖူးလား ဆရာ.... မှောင်မှောင်မဲမဲထဲက မဏ္ဍပ် လင်းလင်းလေးတွေ ကြည့်သွားပါကြောင်း....
မသိဘူးဗျာ.... ပြည်နယ်မြို့ကြီးက ပကတိမှောင်မိုက်နေလို့ ... ကင်မရဖရှက်ခ်ျနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ဟင်းပွဲလေးတွေကိုပဲ လင်းလင်းထင်းထင်း သရေကျသွားပါကြောင်း..။
ဘားအံရဲ့ ဇွဲကပင်အလှလေးတွေ သဘောကျတယ်..း)).. ကျန်တာတော့သိဘူး.. :D..
ကြက်ဖြစ်သွားတဲ့ ဆြာကြည်ရဲ့ သင်္ကြန်စွန့်စားခန်းကတော့ဖြင့် မှောင်မှောင်နဲ့မဲမဲပါလားဆြာရယ်း))
ဆရာရေ ပုံလေးတွေကြည့် စာလေးတွေဖတ်ရင်း အပိုင်း(၃)ကို မျှော်နေပါတယ်
လုပ်နည်းလေးပါ သိချင်တာ :P
ကနည်းတော့ မသိချင်တော့ပါဘူး ကိုယ်တိုင်လည်း ကမှမကတတ်တာဆိုတော့လေ။
ဘားအံကို ရောက်ဖူးတာ ကြာပြီ
ဓါတ်ပုံတင်ခွင့် ထောက်ခံစာ ပေးပါ..
ဆရာတို့ စုံတွဲက အခုမှ ဟန်နီးမွန်း ထွက်ရတာ ထင်တယ်။း)
အင်း.. အခုခရီးက ဟန်းနီးမွန်းထက် ပို ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းလောက်တယ်။ ရင်တမမနဲ့ မောင်းနင်နေရတာကိုး။း)
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမှက်တရ
29 April 2012 at 02:09
ဆရာဟန် အနောက်က လိုက်ရတာလည်း သိပ်မနှိပ်ပါလားဗျာ။ မှောင်မှောင်နဲ့မဲမဲ မြစ်ထဲ ဒိုင်ဗင်ဆင်းကိန်းချည်းပဲ တိုးနေတော့တယ်။ ဗျစ်ရွှေရည်ခွက်လေးတောင် မမြင်လိုက်ရဘူး
လင်မယားနှစ်ယောက်သွားတဲ့ခရီးဆိုတော့ ကြည်နူးရမလားမှတ်တယ်။ ကိုဟန်ကြည်တစ်ယောက်တော့ စိတ်ပင်ပန်းရတော့တာကိုး။ ပြည်နယ်တွေလည်း တိုးတက်ဖို့တော်တော်လိုသေးတယ်ထင်တယ်ဗျာ။ ဘားအံကိုခဏတော့ရောက်ဖူးတယ်။ သေသေချာချာကြီးတော့ မနေခဲ့ရဘူး။ အလုပ်နဲ့သွားတာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ကြန်တွင်းဆိုတော့လည်း ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေမြင်ရတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလူမရှိတဲ့နေရာတွေ မီးလင်းနေပြီး လူရှိတဲ့နေရာတွေမီးမှိန်နေသရွေ့ တိုင်းပြည်ကတော့ နောက်ကျကျန်သေးတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေပဲပေါ့ဗျာ။
ဒီလိုမျိုးလေး အေးအေးလူလူ ခရီးထွက်ကြတာ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်..အိမ်မက်တောင် ကရင်လူမျိုးဖြစ်ပြီး ဘားအံတစ်ခါမှ မရောက်ဖူးဘူးလေ..မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိစဉ်က မငြိမ်မသက်ဖြစ်တယ်ကြားပြီး အိမ်က စိတ်မချဘူး.. ဦးဟန်ကြည်တို့ သွားလည်တာကို ပဲ လာကြည့်ရင်း စိတ်ကူးနဲ့ ပဲသွားလိုက်တော့မယ်..ဒုတိယပိုင်း မျှော်နေမယ်နော်.
ဆရာဟန့်အဖြစ်ကလည်း မြစ်ထဲ ဒိုင်ဗင်ထိုးမယ့်ကိန်းပါလား..နောက်အပိုင်းတွေ မျှော်နေတယ် ဆရာရေ
ဆရာလာမှ ဘားအံက မီးပျက်ရတယ်လို့ ...
ကော့ဂွန်းဂူက နှစ်ဆန်ဒတစ်ရက်နေ့ လား၊နှစ်ရက်နေ့ လားမသိဘူး ဘုရားပွဲ ရှိတယ်လေ...
နောက်တစ်ခါ ဘားအံကို လာလည်ရင်
ကျွန်တော့်ကို အကြောင်းကြားလိုက်ရင် လည်စရာတွေ
ကွန်မန့်ပေးကာမှ သိက္ခာကျစရာ ဖြစ်တော့မှာပဲ ၊ ဓါတ်ပုံကြည့်ပြီး ဘယ်နေရာလည်း သိသလိုလိုနဲ့ ပြောမတတ်ဘူး ဖြစ်နေတယ် :-)
ပုံထဲပါတဲ့ ဗန်ဒါပင်က နေရာတိုင်းတော့ မရှိပါဘူး ၊ မြို့အဝင် ကားဂိတ်ကြီးနားတို့ ပြည်နယ်ရုံးဖက်နားတို့နဲ့ အခြားနေရာ အနည်းကျဉ်းပဲရှိတတ်တာ မမှတ်မိဘူး ဖြစ်နေတယ် ။ လမ်းလယ်က ကွန်ကရစ်တုံးတွေ တွေ့ပြန်တော့ ချောင်ကြိုချောင်ကြားလဲ မဟုတ်ပြန်ဘူး ။ ထားပါတော့ ။
တည်းခိုခန်းကတော့ ကိုဟန်ကြည် အခန်းမရလိုက်တဲ့ တည်းခိုခန်းတွေက သီးသန့် အိမ်တွဲကလေးတွေနဲ့မို့ အနည်းဆုံးတော့ လွတ်လပ်တာ သေချာတယ် ၊ ကျန်တဲ့ တည်းခိုခန်းတွေကတော့ ကိုယ့်မြို့ကို တည်းလို့ မရဘူးဆိုတော့ မပြောတတ်ဘူးဗျ ၊ ပတ်သက်ဖူးသူတွေလောက်ပဲ သိတတ်ကြတာကိုး ။
ဒါပေမယ့် ကိုဟန်ကြည်တစ်ယောက် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဘာဝကို ခံစားတတ်အောင် မြို့မှောင်မှောင်နဲ့ ဧည့်ခံနိုင်တာကိုတော့ ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ :-)
လက်ဝှေ့ရုံကတော့ လွန်းညဖက်မှာလား ၊ အိန္ဒုဖက်လား ၊ ဇွဲကပင်တောင်ခြေ ခလောက်နို့ဖက်လားပဲ ။